Izindaba - Ngabe imboni yezokuxhumana ezobukeka izobe “ingumuntu osindile” kwi-COVID-19?
Ngabe imboni yezokuxhumana ezobukeka izokuba "osindile" we-COVID-19?
Ngo-Mashi, i-2020, i-LightCounting, inhlangano yocwaningo yemakethe yezokuxhumana, yahlola umthelela we-coronavirus entsha (i-COVID-19) embonini ngemuva kwezinyanga ezintathu zokuqala.
Ikota yokuqala yonyaka wezi-2020 isizophela, futhi umhlaba uhlushwa wubhadane lwe-COVID-19. Amazwe amaningi manje acindezele inkinobho yokumisa okwesikhashana emnothweni ukunciphisa ukubhebhetheka kwalo bhubhane. Yize ubukhulu nobude besifo esiwumshayabhuqe kanye nomthelela waso emnothweni kusengakacaci kahle, ngokungangabazeki kuzodala ukulahleka okukhulu kubantu nasemnothweni.
Ngokuphikisana nalesi sizinda esibuhlungu, izikhungo zokuxhumana ngocingo kanye nedatha zikhethwe njengezinsizakalo ezibalulekile eziyisisekelo, okuvumela ukusebenza okuqhubekayo. Kepha ngaphezu kwalokho, singalindela kanjani ukuthi kuthuthukiswe uhlelo lwezokuxhumana ngocingo / lokuxhumana?
ILightCounting ifinyelele eziphethweni ezi-4 ezisuselwa eqinisweni ngokuya ngemiphumela yokubuka nokuhlola yezinyanga ezintathu ezedlule:
IChina iyaqala kabusha ukukhiqiza kancane kancane;
Izinyathelo zokuhlukaniswa komphakathi ziqhuba ukufunwa kwe-bandwidth;
Ukusetshenziswa kwemali yengqalasizinda kukhombisa izimpawu eziqinile;
Ukuthengiswa kwemishini yohlelo nabakhiqizi bezinto kuzothinteka, kepha hhayi okuyinhlekelele.
I-LightCounting ikholelwa ekutheni umthelela wesikhathi eside we-COVID-19 uzosiza ekuthuthukiseni umnotho wedijithali, ngakho-ke udlulela embonini yezokuxhumana yokukhanya.
Isazi “sePunctuated Equilibrium” se-paleontologist Stephen J. Gould sikholelwa ukuthi ukuziphendukela kwemvelo kwezinto eziphilayo akuqhubeki ngesivinini futhi okungaguquki, kepha kudlula ukuzinza kwesikhathi eside, lapho kuzoba khona ukuziphendukela kwemvelo okusheshayo okufushane ngenxa yokuphazamiseka okukhulu kwemvelo. Umqondo ofanayo usebenza emphakathini nakwezomnotho. ILightCounting ikholelwa ekutheni ubhadane lwe-coronavirus lwangowezi-2020-2021 lungasiza ekuthuthukisweni okusheshayo komkhuba “womnotho wedijithali”.
Isibonelo, e-United States, amashumi ezinkulungwane zabafundi manje afunda kude namakolishi nezikole eziphakeme, futhi amashumi ezigidi zabasebenzi abadala nabaqashi babo bathola umsebenzi wesikole okokuqala ngqa. Izinkampani zingabona ukuthi ukukhiqiza akukaze kuthinteke, futhi kunezinzuzo ezithile, njengezindleko ezincishisiwe zehhovisi kanye nokwehla kokukhishwa kwegesi engcolisa umoya. Ngemuva kokuthi i-coronavirus ekugcineni ilawulwe, abantu bazonamathisela ukubaluleka okukhulu empilweni yezenhlalo futhi imikhuba emisha efana nokuthenga ngaphandle kokuthinta izoqhubeka isikhathi eside.
Lokhu kufanele kukhuthaze ukusetshenziswa kwezikhwama zedijithali, ukuthenga nge-inthanethi, izinsizakalo zokulethwa kokudla, futhi kwandise lemiqondo ezindaweni ezintsha njengamakhemisi okuthengisa. Ngokufanayo, abantu bangalingwa yizixazululo zendabuko zokuhamba zomphakathi, njengezitimela ezihamba ngaphansi komhlaba, izitimela, amabhasi nezindiza. Ezinye izindlela zinikeza ukuhlala wedwa nokuvikelwa, okufana nokuhamba ngamabhayisikili, amatekisi amancane amarobhothi, namahhovisi akude, futhi ukusetshenziswa nokwamukelwa kwazo kungaba ngaphezulu kunangaphambi kokuba igciwane lisabalale.
Ngaphezu kwalokho, umthelela wegciwane uzoveza futhi uqhakambise ubuthakathaka nokungalingani okukhona ekufinyeleleni nge-broadband nasekutholakaleni kwezokwelapha, okuzokhuthaza ukufinyelela okukhulu kwi-Intanethi engaguquguquki neselula ezindaweni ezihlwempu nezasemakhaya, kanye nokusetshenziswa okubanzi kwe-telemedicine.
Okokugcina, izinkampani ezisekela uguquko lwedijithali, kufaka phakathi i-Alphabet, i-Amazon, i-Apple, i-Facebook, ne-Microsoft zikulungele ukumelana nokwehla okungenakugwemeka kepha okuhlala isikhashana ekuthengisweni kwe-smartphone, ithebhulethi, ne-laptop kanye nemali engenayo yokukhangisa online ngoba banesikweletu esincane, Futhi ukugeleza kwemali engamakhulu ezigidigidi kuseduze. Ngokuphambene nalokho, izinxanxathela zezitolo namanye amaketanga okuthengisa angashaywa kanzima yilo bhubhane.
Vele, kuleli phuzu, lesi simo esizayo ukuqagela nje. Kucabanga ukuthi sikwazile ukunqoba izinselelo ezinkulu zezomnotho nezenhlalo ezilethwe ubhadane ngandlela thile, ngaphandle kokuwela ekucindezelekeni komhlaba wonke. Kodwa-ke, ngokujwayelekile, kufanele sibe nenhlanhla yokuba kulo mkhakha njengoba sihamba kulesi siphepho.